Ezona mpuphu zintle zeziQholo ezi-6 zokuYila iziqholo - Ubuhle
Impilo Ifashoni Yomtshato Iinto Zokuzilungisa Umindiya Ulusu Celeb Jonga #isenzosichasene Nokuxhatshazwa Ikhitshi Elizinzileyo Uhlobo Lweceleb Iindaba Zefashoni
Iiduphu ezi-2 zePerfume ezinuka njengeFragrances oyithandayo
Ukuba usemarikeni ngevumba elitsha kodwa awunalo uhlahlo-lwabiwo mali lokulahla ikhulu kunye neerandi kwibhotile, ufike kwindawo elungileyo. Sibethe UMona Kattan , Umseki-mbumba kunye nomongameli weHuda Beauty & Kayali (kunye ne-self-evakaliswe ngevumba elimnandi elingaphezulu kweebhotile ezingama-2 000 zeziqholo!), ukufumana ingcebiso. Apha ngezantsi, uya kufumana iingcebiso ekukhetheni ivumba lokutyikitya, ukuba ungayenza njani ukuba ihlale ixesha elide kulusu lwakho kunye neempepha zeziqholo ezimbalwa onokuzithenga ngoku.
Ukhetha njani okanye ufumana ivumba lokusayina?
Inyathelo lokuqala kukuchonga ukuba zeziphi iintsapho ezinevumba oqhele ukutsalwa kulo, ucacisa uKattan. Umzekelo, ndiyazithanda iigourmands ezimnandi okanye iziqholo ezitsha kunye neentyatyambo. Nje ukuba ndicinge ukuba, ndiqale ukuvavanya iintlobo ngeentlobo zeziqholo kwezi ntsapho ukuze ndibone ukuba zindisebenzele ntoni, utshilo. Ukujonga, ivumba livame ukwahlulwa libe ziindidi ezine eziphambili: iintyatyambo, i-oriental, iinkuni kunye nokutsha (nangona ezinye ziqhekeza zide zisixhenxe okanye ezisibhozo iindidi ukubandakanya i-citrus, aromatic kunye ne-chypre).
iikowuti ezinxulumene nomhlobo osenyongweni
Ndicebisa kakhulu ukuba ndenze uphando kwangaphambili ukwenza inkqubo yesampulu ibe lula, kodwa akukho ndlela ibhetele yokwenza oku kunokuvavanya iziqholo ezahlukeneyo, kuba nganye inuka ngokwahlukileyo kubantu abohlukeneyo, icebisa uKattan. Kwaye inokutshintsha ngokuhamba kwexesha ngokunjalo, ke xa usampula isiqhumiso esitsha, qiniseka ukusampula kangangeentsuku ezininzi ukuze uzinike ixesha elaneleyo lokubona ukuba uyonwabele ngokwenene ngaphambi kokuyithenga.
Kutheni ezinye iziqholo zibiza kakhulu kunezinye?
Amaxabiso evumba elimnandi aqhutywa ikakhulu sisixa seoyile esencwadini kunye nemvelaphi yezithako, ucacisa uKattan. Ukusela utywala kancinci kwisiqholo kunye neoyile eninzi kuyo, ukuhombisa kuya kuhlala ixesha elide. Kungenxa yokuba utywala bumphunga ngokukhawuleza bushiya ivumba elincinci kulusu ixesha elincinci, utshilo uKattan.
Imvelaphi kunye nokunqaba kwezithako kwizithambiso yenye yezona zinto ziphambili zexabiso. Umzekelo, inqabile kwaye engaqhelekanga ngakumbi iintyatyambo okanye imiski esetyenzisiweyo ekuqambeni, esi siqholo siya kubiza kakhulu.
Ngaba unazo naziphi na iingcebiso zokwenza isiqholo sakho sihlale ixesha elide?
Ewe! Ukuqala, ulusu lwakho kufuneka luhlale lufakwe ngokufanelekileyo ukuze luthathe isiqhumiso, esenza ukuba isiqhumiso sihlale ixesha elide. Ndihlala ndicebisa ukufaka into yokuthambisa okanye i-vaselina ngaphambi kokuhluma, utshilo uKattan.
Ngokuphathelele apho uza kuhluma khona, uKattan ucebisa ukuba uhlala usitshiza ngesiqholo sakho kwiindawo zakho zokubetha (okt, izibilini zakho, ngasemva kweendlebe, ngaphakathi kweengqiniba zakho nasemva kwamadolo akho) kuba ezo ndawo ziya kushushu emini kwaye wenze ukuba ulusu lwakho lukhuphe ivumba xa ushukuma. Kwaye khumbula: Musa ukuzihlikihla izihlahla zakho emva koko. (Inokuwanciphisa amanqaku aphezulu kwisiqholo sakho kwaye ikhawulezise umphunga.)
Kulungile, ngoku ukuba sigqibile ikhosi ngevumba elimnandi 101, masikhe sisebenzise ezinye iziqholo zobulawu zeziqholo zethu eziyintandokazi zoyilo.
Ezinxulumene: Yintoni uSillage? Kwaye i-7 eminye imiGaqo yesiQholo esimnandi
Iiduphu zePerfume ezi-6 onokuzithenga ngoku:
1. Vogue nguMilton Lloyd, 1.85 oz, $ 9
Iifani zeChanel No. 5 zibiza le dupe njengesixhobo esingasasebenziyo sevumba lomfanekiso. Ukuthandana kwakhona kwi-'20's, uChanel waba ngowokuqala ukusebenzisa izixhobo ezibizwa aldehyde kwiziqholo, utsho uKattan. I-Aldehydes yahlukile ngokwenyani kwaye iziqholo zithi ziyanceda ukuzisa ukukhanya kwivumba elimnandi okanye ziyincede. Le dupe yase-UK ine-aldehydes esele ikhankanyiwe kunye namanqaku ekwabelwana ngawo nge-ylang ylang kunye ne-neroli ukuze isebenze njengokusondela kufutshane neklasikhi (ngeqhezu leendleko).
Yithenge ($ 9)
2. IGingham nguBhafu kunye neMisebenzi yoMzimba, 1.7 oz, $ 40
Ngaba u'Adore Dior? Emva koko unokufuna ukuzama i-spritz yale-deu ye-parfum evela kwiBhafu kunye neMisebenzi yoMzimba (aka apho uninzi lwethu luqala khona ukufumana ivumba elimnandi). IJAdore Dior livumba leentyatyambo nelineziqhamo elinee-undertones zomthi ezithambileyo. Indibaniselwano inika eli vumba livumba litsha, licocekile kwaye libubhinqa, utshilo uKattan. Ukufumana into enokuthelekiswa, khangela indibaniselwano efanayo yamanqaku aphezulu kunye nasezantsi. I-Gingham idibanisa i-violet kunye namanqaku e-citrus (njengoko kwenza uJ'Adore).
Yithenge ($ 21)
3. Katy Perry Killer Queen Eau de Parfum Chela, 3.4 oz, $ 20
Uyayithanda iViktor kunye neRomb's Flower Bomb? Isiqhamo esithandayo siyathandeka kwaye siyatyatyamba kwaye sibhinqa kakhulu. UKumkanikazi obulalayo kaKaty Perry (obizwa ngegama lengoma kaKumkanikazi) wabelana ngamanqaku afanayo epatchouli kunye nejasmine enza la mavumba mabini afane.
Yithenge ($ 20)
ukuzivocavoca ukususa amafutha esiswini
4. Iziqholo ze-Instyle Ezikhuthazelwe yingelosi kaThierry Mugler, 3.4 oz, $ 9
Ukuba awukwazi ukufumana ingelosi kaThierry Mugler eyaneleyo, ayinguwe wedwa. Ibisoloko ingoyena mntu uthengisa kakhulu kwihlabathi lonke ukusukela oko yafika okokuqala ngo-1992. Lelona vumba limnandi lokugqibela, utshilo uKattan. IGourmand sisiqholo esaziwa ngokuba ngamanqaku atywayo kwaye sidla ngokubizwa ngokuba sisiqholo sedessert. Le jusi inentabalala yesithako esinye esibizwa ngokuba praline , okanye i-ethyl maltol, enuka iswiti yomqhaphu, uyacacisa. Le dupe ivela kwi-Instyle Fragrances ithi kwileyibhile: Iphefumlelwe ngokuthe ngqo yiNgelosi kaThierry Mugler.
5. I-Yves Rocher yendalo L'I-Eau de Toilette, i-2.5 oz, i- $ 50
Ukuba uyayithanda iBlue Blue yeDolce kunye neGabanna, unokufuna ukuzama eli vumba lingaziwayo lincinci kuYves Rocher. Njengamanqaku kaKattan, uguqulelo lwe-D & G lubonisa ukugqabhuka okuqaqambileyo kwesitrasi kunye nesiseko esahlukileyo semithi kunye nemisipha, ezenza ivumba elimnandi njengesixhobo sokuphakamisa imeko yangoko. Le dupe ye-indie ibandakanya amanqaku emon, ibergamot, umsedare kunye nemusk ukuyinika imvakalelo efanayo yokuhlaziya njengenguqulelo yomyili.
Yithenge ($ 50)
6. UZara Applejuice Eau de Toilette, 3.4 oz, $ 18
Ukuba ivumba lakho lokuya nevumba nguMarc Jacobs Daisy, ungumlandeli wamanqaku aluhlaza. I-Daisy yoqobo ihlelwe kumzi-mveliso wevumba njengevumba eliluhlaza. Amanqaku aluhlaza kwiziqholo azisa crisp, aluhlaza, imvakalelo yendalo kwivumba elimnandi, ucacisa uKattan. IDaisy idityaniswe ne-sitrobheli yokunkcenkceshela umlomo, iintyatyambo ezintle kunye nemithi emnandi. I-Applejuice yeZara ifaka amanqaku e-apile, i-peony kunye ne-violet ukukunika ukufana okufanelekileyo kwinguqu ye-MJ.
Yithenge ($ 18)
Ezinxulumene: Ezona zi-18 zeziQholo eziGqwesileyo zaMakhosikazi, ngokutsho kwabafazi ababathandayo
Izigaba Uphononongo Lweemovie Ukucwangciswa Kunye Neengcebiso Impilo Yengqondo
Ukusetyenziswa kwevasel petroleum jelly
iingcebiso zokukhanya kwesikhumba ekhaya
unyango olwenziwe ekhaya lokuwa kweenwele
uninzi lweefilimu zothando hollywood
UJohn cena kunye nomfazi
indlela yokulahla iinwele esilevini